Wararka - Aug 23-25,2017/ VIETBEAUTY2017 /Yiwu Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd.
Maanta ayaa lagu dhawaaqay in FACESHOWES ay soo bandhigi doonto [VIETBEAUTY2017] Agoosto 23-25,2017. Nambarka booth waa D05.
Tani waa ka qaybgalka ugu horreeya ee shirkadeena ee bandhig caalami ah, oo uu hogaaminayo madaxayaga, iyo wadar ahaan 4 la-hawlgalayaashi si ay u bixiyaan adeegyada qof walba. Bandhigan, waxaan keenay shirkadda ugu weyn ee 6 qaybood ee alaabta, (Nail gel Polish, UV sterilizer). Daloolinta cidiiyaha, boorka cidiyaha, nalka ciddiyaha, mashiinka wax lagu dhaqo) oo wadartoodu ka badan tahay 40 alaab. Ku soo dhawoow qof walba inuu yimaado qolkayaga wadatashiga
MBS waxaa soo qabanqaabiyay Informa, dhacdada kaliya ee B2B ee Vietnam. Informa waxay qabanqaabisaa boqolaal bandhigyo adduunka ah sannad kasta, waxayna had iyo jeer ilaalin jirtay sumcad wanaagsan oo xirfadeed iyo tayo sare leh. Bandhig kastaa waa dhacdada ugu weyn ee caalamiga ah oo leh iibsadaha ugu xirfadda badan dalka, waxayna ku raaxaystaa sumcad sare oo ka dhex jirta iibsadayaasha xirfadleyda ah iyo bandhigayaasha!